मृत्यु भएकाको कोरोना परिक्षण नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन - समय-समाचार
मृत्यु भएकाको कोरोना परिक्षण नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन
समय-समाचार बुधबार, २०७७ भदौ ३१ गते, १९:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं, भदौ ३१ । मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको नमुना संकलन गरेर कोरोना परिक्षण नर्गन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मृत्यु भएका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएका हुन ।
‘मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको नमुना झिकेर कोरोना परीक्षण गरेको सूचना आएको छ ,तर अब त्यस्तो नगर्न निर्देशन छ,’ प्रवत्ता डा. गौतमले भने, ‘कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिको मृत्यु भएर शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउनुपर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरु १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ ।’
प्रवत्ता डा. गौतमका अनुसार इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै लैजाने उनले बताए ।